जलविद्युतमा विदेशी लगानी - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
मङि्सर १३, २०७४ 348 रामराज शर्मा
सरकारमा रहनेहरूले कहिले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट त कहिले १७ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सुनौला सपना देखाइरहेका छन् । सरकारको पर्याप्त विद्युत्् उत्पादन गर्दै देश उज्यालो पार्ने तथा भारत र अन्य देशमा विद्युत् निर्यात गर्दै वैदेशिकव्यापार घाटा कम गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। अहिलेकै गतिमा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्ने हो भने केही वर्षमा भारतबाट विद्युत् आयात नगरीकन पनि लोडसेडिङमुक्त त गर्न सकिएला तर त्यो भन्दा धेरै प्रगति हुने देखिन्न । नेपाल सरकार र नेपालभित्रकै निजी लगानीकर्ताहरूमार्फत मात्रै सरकारको यो लक्ष्य असम्भवप्रायः छ । प्रतिमेगावाट सरदर १८ देखि २० करोड अनुमानित लागत लाग्ने हुनाले दश हजार मेगावाटका लागि १८ देखि २० खर्ब रुपियाँ लाग्छ भने १७ हजार मेगावाटका लागि ३० देखि ३४ खर्ब रुपियाँ लाग्छ । यसरी हेर्दा प्रत्येक वर्ष जलविद्युत््विकासमा मात्रै सरदर३ खर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । एउटै क्षेत्रमा यति धेरै लगानी देशभित्रबाट जम्मा गर्नु भनेको असम्भव प्रायः र निकै जोखिमपूर्ण पनि हुन्छ यसर्थ वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्नु निकै जरुरी छ । जलविद्युत््मा वैदेशिक लगानी आउनु भनेको पैसा मात्रै भित्रिने होइन कि नयाँ प्रविधि,दक्ष नेपाली जनशक्तिको उत्पादन र देशका अन्य क्षेत्रमा पनिविदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याउन उत्प्रेरणा गर्नुसमेत हो।
जलविद्युत्मा विदेशी लगानी आउनु भनेको पैसासँगै विधि, दक्ष नेपाली जनशक्तिको उत्पादन र देशका अन्य क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याउन उत्प्रेरणा गर्नु समेत हो।